Ngubani onquma igama leziphepho? | Isimo Sezulu Senethiwekhi
I-Los izivunguvungu Yizimo zezulu, ezibonwa yisathelayithi, zibonwa njengezinhlelo ezihleleke kakhulu, futhi ezinobuhle obubodwa. Kodwa-ke, zivame ukudala umonakalo omkhulu wezinto ezibonakalayo futhi zingabulala amakhulu abantu, njengoba nje iSiphepho uMatthew senze eHaiti.
Kodwa ngubani onquma igama leziphepho? FUTHI, Kungani banegama labo?
Uhlu lwamagama ezishingishane ezishisayo ezakha e-Atlantic Ocean Yadalwa ngo-1953 yi-United States National Hurricane Center (NHC). Njengamanje, lolu hlu lusetshenziswa njengezinga lohlu lwezinye izifunda zomhlaba, futhi lubuyekezwa yi-World Meteorological Organisation (WMO), okuyinhlangano yeZizwe Ezihlangene ezinze eGeneva, eSwitzerland.
Amagama eziphepho ahlelwe ngokulandelana kwama-alfabhethi, ngaphandle kwezinhlamvu u-Q, U, X, Y, no-Z, amagama abesilisa nabesifazane bayashintshana. Amagama ahlukile esifundeni ngasinye, ukuze izexwayiso zinikezwe kangcono futhi akukho ukudideka.
Noma kungabonakala ngenye indlela, amagama asetshenzisiwe, hhayi ngesiNgisi kuphela, kepha nangeSpanish nesiFulentshi. Ngaphezu kwalokho, zisetshenziswa kabusha njalo eminyakeni eyisithupha, kodwa kukhona ezinye eziyeka ukusetshenziswa uma isiphepho okukhulunywa ngaso siye saba sibi kakhulu, njengoba kwenzeka kuKatrina, owashiya abangu-2000 2005 beshonile eNew Orleans (USA) ngo-XNUMX, isibonelo.
Njengokulangazelela, kufanele kushiwo lokho izazi zezulu zazisebenzisa kakhulu amagama abesifazane phakathi neMpi Yezwe II: amagama omama babo, amakhosikazi abo noma abathandi babo, kuchaze uKoji Kuroiwa, oyinhloko yohlelo lweWMO tropical cyclone. Kusukela ngawo-1970, amagama abesilisa nawo afakwa ukugwema ukungalingani ngokobulili.
Kodwa-ke, izivunguvungu zabesifazane zibulala abantu abaningi kunalezo ezinamagama abesilisa, ngokusho kuka- a ukutadisha kusuka e-University of Illinois (USA). Isizathu ukuthi okwedlule akuvamisile ukuthi kuthathwe ngokungathi sína kakhulu, ngakho-ke izinyathelo zokuzilungiselela ezidingekayo azithathwa ukubhekana nazo. Ngakho-ke, besuka ku-National Hurricane Center bagcizelela ukuthi, noma ngabe igama lesiphepho linegama lini ukugxila kumele kubekwe kusongo olubangelwa yilowo nalowo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Iziphepho » Ngubani onquma igama leziphepho?